Qiimihii Ugu Sareeyey Abid Oo Lagu Kala Iibsanayo Tigidhada Ciyaarta El Clasico Ee Axada
HomeWararka MaantaQiimihii Ugu Sareeyey Abid Oo Lagu Kala Iibsanayo Tigidhada Ciyaarta El Clasico Ee Axada
Ciyaarta maalinta Axada ah ee todobaadka dambe ku dhex mari doonta garoonka Santiago Bernabeu , naadiyada Real Madird iyo Barcelona , ayaanay suuro gal ahayn inaad tigidhka lagu daawanayo ku hesho sifo sharci ah, iyadoo maalmo badani wali hadhsan yihiin.
65 kun oo ka mid ah taageerayaasha Real Madrid ayaa sii haysta tigidhada xili ciyaareedka oo dhan ay kooxdu ku yeelanayso garoonkan qaadkiisu yahay 83 ka Kun ee Kursi.
Taageerayaasha aan ahayn kuwa rasmiga u sii haysta ayaan halli doonin wax tigidh ah , iyadoo qofkii raba la sheegay in qiimaha ugu hooseeya ee uu ku helli karaa ay tahay 70 Euro ( todobaatan lacagta Yurub ah) .
Tigidhka qiimihiisu sidaas qaaliga u yahay oo ah kan ugu hooseeya xaga qiimaha , ayaa taageeraha iibsadaa uu ka daawan doonaa kuraasta dabaqa ugu sareeya ee garoonka Bernabeu. Halka qofka doonaya inuu kuraasta ugu hooseysa ee (First Standard) ka loo yaqaanaa ku helli karo qiimaha ugu sareeya oo ah 340 euro ( Saddex boqol iyo Afartan Yuro ) .
Jariidada afka dheer ee Marca ayaa baahisay qiimaha lagu helli karo tigidhada daawashada ciyaarta El Clasico oo ay inaga xigto 6 cisho, qiimahaas oo ku kala xidhan hadba dabaqa ama dhismaha garoonka qaybta aad ka fadhiisanayso.
Qiimaha ugu hooseeya oo ah kan dabaqa afraad ee garoonka ayaa ah €70 euros ee dhinaca woqooyi iyo koonfureed ee garoonka, halka qofka ka daawanaya qaybta dabaqa saddexaad uu ku heli karo qiimaha u dhaxeeya €100 iyo €130, kuraasta dabaqa labaad ayaa qiimohoodu u dhexeeyaa €135 ilaa €215, halka dabaqa koowaadna uu yahay €185 ilaa €295, halka kuraasta dhulka ku samaysan ee hoosta lagu helli karo tigadhadooda inta u dhaxaysa €210 ilaa €340.
Wayne Rooney oo ka hadlay mustaqbalkiisa kubadda cagta
Neymar oo ku muuse-naabay inuu Finalka K/ Aduunka Waajaho saaxiibkii Lionel Messi
27/05/2014 Khadar Dirir